समाचार - के तपाइँ तपाइँको घर मा जैव अपग्रेडेबल फोहोर झोला प्रयोग गर्नुहुन्न?
के तपाइँ तपाइँको घर मा बायोडिग्रेडेबल कचरा बैग को उपयोग गर्नुहुन्न?
बायोडिग्रेडेबल फोहोर झोला धेरै राम्रो छ, कति जनालाई थाहा छैन? त्यसपछि छिटो म संग थाहा पाउनुहोस्।
प्लास्टिक मा प्रतिबन्ध को घोषणा संगै, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका र अष्ट्रेलिया जस्ता धेरै भन्दा धेरै देशहरु प्लास्टिक उत्पादनहरु को उपयोग प्रतिबन्ध गर्न थालेका छन्। यी देशहरु प्लास्टिक उत्पादनहरु लाई प्रतिस्थापन गर्न को लागी बायोडिग्रेडेबल उत्पादनहरु को उपयोग जारी छ। यस राष्ट्रिय नीति को सन्दर्भ मा, हामी, नागरिक को रूप मा, पेट्रोलियम बाट बनेको प्लास्टिक झोला को उपयोग कम गर्न को लागी सहयोग गर्नु पर्छ र मकई स्टार्च र PBAT बाट बनेको बायोडिग्रेडेबल फोहोर झोला को उपयोग गर्नु पर्छ।
मूल प्लास्टिक फोहोर झोला अब किन्न सकिँदैन। फोहर झोला को यस प्रकार एक धेरै स्थिर संरचना छ र गिरावट गर्न सजिलो छैन। प्राकृतिक गिरावट १०० बर्ष वा सो भन्दा बढि लाग्छ। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यस प्रकारको प्लास्टिक उत्पादनहरु जलाउन सक्छन्, तपाइँ गलत हुनुहुन्छ। जलाएर विषालु ग्यास उत्पादन गर्दछ र वायु प्रदूषणको कारण बन्छ। यदि केहि प्यारा जनावरहरु गल्तीले खाईन्छन्, उनीहरु भोकै मर्नेछन् किनकि फोहोरको थलो पचाउन सकिदैन।
हामीसँग अब राम्रो छनौट छ, र सबैले कार्य गर्न सक्छन्। हामीलाई बायोडिग्रेडेबल घरपालुवा फोहोर झोला सँगै किन्न दिनुहोस्। Longjun Tianchun पर्यावरण संरक्षण कं, लिमिटेड गहिरो दस बर्ष भन्दा बढी को लागी उद्योग मा संलग्न गरीएको छ, र विकास र biodegradable उत्पादनहरु को उत्पादन को लागी समर्पित छ। कम्पनी संसार मा निर्यात, वार्षिक बिक्री ५० मिलियन अमेरिकी डलर पुग्न संग। हामी पनि प्रयोगकर्ताहरु को व्यक्तिगत आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न र ग्राहकहरु को सन्तुष्टि सुधार गर्न को लागी प्रयोगकर्ताहरु बाट OEM र ODM अनुकूलित सेवाहरु लाई स्वीकार गर्दछौं।